Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed oo booqday Xarunta Ciidanka Talyaaniga ay ku leeyihiin Jabuuti – Radio Muqdisho
Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed oo booqday Xarunta Ciidanka Talyaaniga ay ku leeyihiin Jabuuti
Taliyaha Ciidanka Boliiska sarreeye gaas, Cabdi Xasan Mahamed Xijaar) iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa booqday Xarunta Ciidanka Talyaaniga ( Carabinier-ga) ay ku leeyihiin Jabuuti, halkaas oo laga abaabulo Tababarada la siiyo Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed.
Waxaa Taliyaha ku Soo dhaweyay xarunta Col, Mario Ligi kaas oo ahaa madaxa howgalka Taliyaaniga.
Kulan dhexmaray labada taliye ayaa looga hadlay sidii horay loogu sii wadi karo tabarada ay saraakiisha talyaanigu siiyaan Ciidamada Booliiska Somaliyeed.
Taliska ciidamada talyaaniga ee jooga dalka Jabuuti ayaa dhankooda balan qaaday in ay sii wadi doonaan tabarada ay siiyaan ciidamada Booliiska Soomaaliyeed.
Soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta tayeynta ciidamada nabad galyada, si loo soo celiyo nabadii iyo kala dambeyntii dalka.
Gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Golaha shacabka BFS oo ku baaqay in la joojiyo colaada ka soo cusboonaatay qeybo ka mida gobolka Mudug.
Kooxaha degmooyinka Waaberi iyo Dharkiinleey oo kulan kama dambeys ah caawa wada ciyaaraya.